Saddex Shirkadood oo Loogu Magacdaray Abaalmarinta Mira Tech! | Martech Zone
Wednesday, April 16, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Seddex shirkadood oo aan si dhow ula safannahay ayaa loo magacaabay finalka Abaalmarinta Mira ee Indiana:
Xaqiiqda - shaki kuma jiro koritaankeeda iyo hoggaankiisa cajiibka ah in shirkaddani ay noqon doonto mid u qalanta abaalmarinta. Waxaa jira qaybo ka mid ah nidaamka ExactTarget oo si fudud uga soo horjeedda sharciyada fiisigiska sida ugu dhakhsaha badan ee ay u soo saari karaan una diri karaan emayllada. Waan jeclaaday 2-dii iyo badhkii sano ee aan u shaqaynayey shirkadda ExactTarget!
Isniinta, waxaan ku raaxeystay joojinta iyo la sheekaysiga Scott Dorsey, Madaxweynaha ExactTarget, oo waxay ila noqotay sidii inaanan weligay ka tegin. Wuu firfircoonaa, rajo wanaagsanaa, oo had iyo jeer dhoola cadeeyay. Inuu waqtiga u qaatay inuu i arko waxay cadeyneysaa sida wanaagsan ee saaxiib iyo lataliye uu u noqday.
Iyada oo booskeyga cusub ee Patronpath, weli waxaan la shaqeynayaa ExactTarget xoogaa yar. Marka aan si buuxda ula kulanno mid ka mid ah macaamiisheenna, waxaan heysaneynaa koontada ugu weyn ee shirkadda ExactTarget oo shaqeyneysa. Koontadaas, ExactTarget waxay noo soo diyaarisay warbixin qaas ah si aan ugu soo dirno emayl iyaga oo matalaya wakiillada dhulka oo aan u soo bandhigno wakiillada warbixin ku saabsan waxa ay daneynayaan macmiilkooda oo ku saleysan gujintooda.
Waa wax weyn in asxaab kooxeed hore ah ExactTarget sidoo kale, maadaama ay soo dhaweynayaan jawaab celinteyda. Inaad maamule wax soo saar halkaa ka noqotid ka dibna aad ugu noqoto kaalinta macmiilku waa shey aad u qiimo badan. (Waxaan jeclaan lahaa inaan awoodo inaan iibsado ikhtiyaarradeyda intaanan lumin!)
Waxaan sidoo kale leenahay koonto Hay'ad leh ExactTarget oo waxaan leenahay is-dhexgal awood leh, iswada leh makhaayadaha. Habeenkiiba, anaga oo aan la macaamilin maqaayada waxaan u dirnaa mid ka mid ah toban ama wax olole ah - dhalasho, sanad guurad, isdhexgal la'aan maalmaha X, iibsashada in ka badan X dollars, iwm. Waa qaab haysa cajiibka ah ee maqaayadaha.
Iyo, anigoo lashaqeynaya Super Bowl Committee 2012, waxaan horumarinayaa a WordPress plugin loogu talagalay macaamiisha otomaatiga ah ee ka socda blog-ka WordPress iyada oo loo marayo ExactTarget. Waxay ku saabsan tahay 80% hadda dhameystiran - waxaan kaliya ka shaqeynayaa isku dayga ah in otomatig ah text shaqada.
Compendium Blogware - Markuu Chris Baggott weli ku sugnaa ExactTarget, waxaan bilownay inaan aragno fursad codsiyada balooggu ay si dhab ah uga faa'iideysato waxyaabaha oo ay u siiso bar-tilmaameed aad u wanaagsan oo loogu talagalay Optimization Engine Search.
Aniga oo wiilkaygu bilaabayo IUPUI, halis uma gelin karin inaan ku boodo markabka 'Compendium' markii uu Chris waydiiyay. Waxay noqon kartaa mid ka mid khaladaadkeygii ugu weynaa. Anigoo xanaaq badan iyo xitaa masayr yar, waxay noqotay inaan fadhiisto oo aan daawado Chris iyo Ali Sales oo u qaadanaya Compendium suuqa! Xusuusin: Ali Sales sidoo kale wuxuu door muhiim ah ka qaatay ExactTarget iyo taariikhda bilowga ee ChaCha… ChaCha sidoo kale waa la magacaabay!
Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kaqaybgalay kulamadii ugu horreeyay ee Sabtida Starbucks halkaas oo aan ku horumarinay kiiska ganacsiga, in kastoo!
Waa kan wareysigii hore ee Chris oo ka hadlaya Compendium:
Compendium waxay samaynaysaa wareegii labaad ee maalgalinta waxayna si dhakhso leh u koraysaa. Isku darka Mashiinnada Raadinta iyo wax-ku-oolnimada sameynta geeddi-socod ee shirkadaha si ay u hirgeliyaan bar-qorista ayaa hadda kulul oo Compendium ayaa ku jira safka hore. Waxaan la istaagay Chris toddobaadyo ka hor waxaanan u tuuray laba fikradood oo dheeri ah oo ku saabsan wax soo saarkiisa.
Chris wuxuu ii ahaa la taliye weyn Cali na wuxuu ii ahaa Madaxweyne dhiirigalin ah implemented waxay hirgeliyeen nuqulkeyga Wakaaladda oo aan dhawaan bilaabi doono. Haddii aad xiiseyneyso Compendium, fadlan si toos ah ila xiriir oo waan ku ogeysiin karaa, “Maxaad u isticmaali weyday oo keliya [Blogger, WordPress, Typepad, iwm.]. Ama waad awoodaa iska qor Compendium's Newsletter (laakiin hubi inaad iisoo dhigto tixraaca!) kuna guuleysto iPod Touch bilaash ah.
Patronpath - Suuqgeynta iyo Ecommerce ee Warshadaha Makhaayada - markii ugu dambeysay laakiin uguyaraan waa shaqaaleeyaha aan hadda shaqeeyo. Patronpath waxay la kulmaysaa koritaan saddex-godle ah hadda. Maaddaama maqaayadaha ay u baahan yihiin inay tuujiyaan boorsooyinkooda sababo la xiriira qiimayaasha oo kordhay iyo tirada la cuno ee soo baxda oo yaraatay, sida kaliya ee ay ganacsigooda u kobcin karaan waa inay helaan ganacsi xoog leh oo wax looga qaado ama loo geeyo.
Dalbashada khadka tooska ah ayaa si toos ah uga koray qaar ka mid ah macaamiisheenna casaanka iyo madow. In kasta oo udub-dhexaadkeennu nahay, waxaan fiiro gaar ah siineynaa sidii aan u hubin lahayn in macaamiisheennu ay ka faa'iideystaan ​​kor u qaadista mashiinka wax lagu raadiyo iyo horumarinta goobta weyn. Kuma filna inaad dalbato khadka tooska ah, waa inaad heshaa dalabka khadka tooska ah - dhibic inta badan tartankeennu seegay.
8-dii bilood ee la soo dhaafay waxaan isku darnay 4 nidaam oo kala duwan oo POS ah, is dhex galka xarun wacaneed, waxaan dib u habeyn ku sameynay isdhexgalkeena si loo yareeyo sicirka ka tagida waxaana u hirgalinay joornaal qaran oo jeesjees ah mid ka mid ah la-hawlgalayaasheena (aan kor ku soo xusnay fulintena ExactTarget Enterprise) Mid ka mid ah bandhiga murqahayaga, silsilad weyn ayaa codsatay muuqaal ka mid ah nidaamkeena oo aan hirgelinay hal usbuuc. Isla muuqaalkaas ayaa ku qaatay bilaha tartanka in la horumariyo. Wax badan oo horumar ah ayaan hadda haysannaa oo waxaan u guureynaa 2008 foostooyin ololaya!
Patronpath si xowli ah ayuu u korayaa waxaanan si xoog leh u riixayaa otomaatig iyo (dhakhso ayaan u noqon doonaa) ka faa'iideysiga xaalad farshaxan jawiga farshaxanka ee Bluelock si aan u sii wado. Waxaan leenahay lamaane horumarineed oo horumarineed oo hirgeliyay qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ecommerce adduunka (caalami ahaan) waxaanan ku kalsoonahay in sannadka 2009, aan noqon doonno xoog weyn xagga warshadaha. Xaqiiqdu waxay tahay inaan ognahay sida suuqgeyntu u shaqeyso, sida ecommerce u shaqeyso, iyo sida maqaayadaha u shaqeeyaan - tartankuna uusan shaqeynin.
Waxaan sidoo kale dhowaan ku darnay Marty Bird isku dhafka. Waxaan u maleynayaa in Marty uu iga saaray 60% culeyskeyga shaqada maalintii uu albaabka ka soo galay, waana farxad aan caadi aheyn inaan la shaqeeyo. Waditaankiisa joogtada ah ee hagaajinta iyo istiraatiijiyaddu waa sida saxda ah ee aan ugu baahan nahay xilligan Patronpath!
Fiiro gaar ah: iska dhaafi Wadada site - waxaan helnay mid cusub oo bishaan socda!
Waa inaan kudarsadaa ma ihi kaliya xiriirka ka dhexeeya sedexdaan shirkadood. Waxaad ogaan doontaa in shirkad waliba ay leedahay astaan ​​gaar ah - mahadsanid Kristian Andersen iyo koox. Kristian waa nin layaableh wuxuuna maamulaa shirkad cajiib ah oo awood u leh inay fuliso wax la mid ah hay'ad ama la talin kale oo aan waligay la shaqeyn jirin. Kristian wuxuu ka caawiyaa shirkadaha yar yar inay weynaadaan, wuxuuna isugu keenay koox aan caadi aheyn halkan si ay u sameeyaan. Isaguba waa saaxiib wanaagsan.
Tags: dhoofintaururka xayeysiintaxayeysiinta facebooklas vegasmiloshirarka internetkacilmi baaristaqaraaradayar Indianabilowga usbuucafarsamo yaqaanshaqada
Ku Daabac Quudinta Dibadda ee Boggaaga WordPress